PowerPoint on Android hadda oo wata Documents si ay u tagaan 2.0 | Androidsis
Waxaan horeyba u haysanay Suuqa Android diyaar u ah soo dejinta nooca cusub ee codsigan oo la yiraahdo Dukumeentiyada lagu socdo V2.0. Dukumiintiyo la tagayo noo ogolaadaa in aan la shaqayno dukumentiyada nooca Word, Excel, PowerPoint iyo PDF.
Noocan 2.0 waxaan ku fulin karnaa:
Taageerada faylka Microsoft PowerPoint se ogolaanaya muuqaalaynta, tafatirka iyo abuurista ee bandhigyada PowerPoint on Android.
Daawade PDF waan awoodnaa leeyihiin heerar badan oo zoom ah, si toos ah u wareejin, bookmarks, hel, door, oo koobiyi qoraalka, iyo taageerada faylalka sirta ah lagu ilaaliyo
Wixii ah Word iyo Excel files ku jira nooca 2.0 set of functions waxaa la kordhiyaa iyada oo lagu daro raadinta iyo beddelka erayada, qaabaynta tirada, qaabaynta bogga, menu-ka macnaha guud, hagaajinta iyo xulashada hababka duubista, hagaajinta xiriirka.
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo codsiga ah, mid bilaash ah iyo mid lagu bixiyo qiimo dhan $ 29,99. Doorashada koowaad, midda xorta ah, waxay noo ogolaanaysaa inaan aragno Word iyo Excel files, laakiin ma tafatirin karno iyaga, kaliya waxaan ka dhex dhex mari karnaa. Xulashada lacag-bixinta waxaan ku yeelan karnaa dhammaan hawlaha arjiga, tafatirka, abuurista, eeg faylasha Ereyga iyo Excel, marka lagu daro awood u leh inuu ciyaaro faylasha PowerPoint iyo pdf on our Android.
Dhab ahaantii nooc cusub oo arjiga la wanaajiyey oo aad loogu taliyay kuwa sida joogtada ah u isticmaala nooca faylasha. Qiimaha wax yar oo qaali ah fikradayda oo waxaan u maleynayaa in haddii ay sii daayeen version la functionalities of PowerPoint iyo daawadayaasha PDF si gaar ah iyo qiimo u dhexeeya $ 1 ilaa $ 3 waxay lahaan lahaayeen iib aad u badan.
Awoodda lagu daawado faylalka PowerPoint ku jira Android Waa liidasho weyn, taas oo waqti qaadanaysa in lagu xalliyo lacag la'aan. Waxaan rajeyneynaa in aysan qaadan waqti dheer
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » AWOODAHA KU SAABSAN ANDROID OO LOOGU SAMEEYAY DUKUMENTIYADA AAD HELI KARAAN 2.0
INDHOON, ANDROID SIDOO KALE OO LOOGU SOO DHAWEEYAY DALMADA